IMikhiqizo YAMAKI YIWU TOYS - Yunis International Trading Co, Ltd.
Imikhiqizo yamathoyizi we-Yiwu maket main ifaka amathoyizi wekhathuni, amathoyizi kagesi, amathoyizi afashisayo, amathoyizi e-plush, amathoyizi endwangu, amathoyizi we-elekthronikhi wamathoyizi, amathoyizi ezinto ezifuywayo
YIWU TOYS MARKET INDAWO
1. Isitezi sokuqala, isiFunda 1, imakethe yokuhwebelana yamazwe omhlaba: Amathoyizi ePlush (Area C), Amathoyizi we-inflatable (Area C), Amathoyizi we-elekthronikhi (Area C no-D), amathoyizi ajwayelekile (Area D no-E).
2. Yiwu amazwe omhlaba wokuhweba wedolobha 1: Isitezi sokuqala sithengisa amathoyizi futhi ubuncane be-oda sihlala sikhona ibhokisi elilodwa. Isitezi esiphansi siyisikhungo esiqondile Sokukhiqiza, esithengisa inani elikhulu lezimpahla.
I-Yiwu yamazwe omhlaba yedolobha lokuhweba idolobha 1: Amathoyizi we-Area B Plush afaka i-Booth No.601-1200, amathoyizi we-Area C Plush, amathoyizi angashisayo kanye namathoyizi kagesi ahlanganisa iBooth No.1201-1800. Amathoyizi e-Area D E-elektroniki namathoyizi ajwayelekile ahlanganisa iBooth No.1801-2400, amathoyizi we-Area E Ordinary ahlanganisa iBooth No.2401-3000.
3. Amathoyizi amakhulu kakhulu kanye namathoyizi amahle enziwe eGuangzhou noma emakethe yakwaChenghai.